Indlu yasezilalini elungisiweyo eKarst entle - I-Airbnb
Indlu yasezilalini elungisiweyo eKarst entle
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguJurij
Ikhaya lethu yindlu yamatye eneminyaka engama-200 eyalungiswa isiqwenga ngesiqwenga ngumzobi. I-decor i-rustic, kodwa iluncedo ngokubanzi kwaye yomelele. Ungafikelela kwithala leencwadi lethu elikhulu ngeencwadi ezivela kuzo zonke iinkalo ezinokwenzeka ukuba ungathanda ukufunda kwangokuhlwa okufanayo. Kukho igadi ethandekayo enendawo yabucala eninzi kunye nomthunzi.
Le ndlu ikwilali ezolileyo kwindawo epholileyo yaseKarst. Ulwandle kwicala lase-Italiya kukuhamba nje okufutshane (imizuzu eyi-25) ngelixa iilwandle zase-Istrias zingaphantsi kweyure.
Indlu ikwiKrajna vas, enye yeelali eziqhelekileyo kwindawo yaseKarst, apho abantu basemaphandleni bagcinwe khona. Kukho ukuhamba okuhle kumahlathi ajikelezileyo, iindlela ezininzi zokuhamba ngebhayisekile kunye ne-agrotourisms onokuthi uyindwendwele. Omnye wabamelwane ngenene ungumvelisi wewayini odumileyo kwaye ungamndwendwela kuvavanyo lwewayini yengingqi yeTeran (phakathi kwezinye iintlobo).
Siza kukunika ukhenketho olukhokelwayo ukuba luyimfuneko, sikucebisa ngezona ndawo zilungileyo zokundwendwela kwaye sikunike iingcebiso zokupheka malunga nokutya kwasekhaya, apho ungaya kuthenga imveliso egqwesileyo kunye nenyama enyangisiweyo kwaye ndikuncede ekulungiseleleni isidlo sangokuhlwa esigqibeleleyo ngewayini ebalaseleyo onokuyicingela.
Siza kukunika ukhenketho olukhokelwayo ukuba luyimfuneko, sikucebisa ngezona ndawo zilungileyo zokundwendwela kwaye sikunike iingcebiso zokupheka malunga nokutya kwasekhaya, apho u…